Bisha Ramadan - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Bisha Ramadaan)
Bisha Ramadaan (Af carabi: رمضان) ama Ramadhan) waa bisha sagaalaad ee Kalandarka Islaamka, iyo bisha uu soo dagay kitaabka Quraanka kariimka ah.
In la Soomo waa bisha Ramadaan waa rukun ka mid ah Tiirarka Islaamka, taasi oo waajib ku ah dhammaan dadka Muslimka ah ee qaangaadhka ah, marka laga reebo dadka xanuusan, kuwa safarka ku jira, dumarka uurka leh, dumarka naas-nuujinaya ilmo, iyo dumarka dhiiga ku jira.
Maalinta ugu horeysa bisha ku xigta Ramadaan, oo ah bisha Shawwal, waa maalinta dadka Islaamka ah u dabaaldegaan dhamaystirka bisha barakaysneyd ee Ramadaan. Maalintani waxaa loo yaqaana Ciid al-Fitr.
2 Kalandarka Hijriga
3 Bilaha Hijriga
Maadaama Kalandarka Islaamku yahay mid ku xidhan dayaxa, bisha Ramadaan waxay bilaabanta marka dayaxu dhasho ama la arko. Sidoo kale, maadaama sanadka Kalandarka Islaamku ka gaaban yahay 10 ilaa 11 maalmood (cisho) Kalandarka Miilaadiga, bisha Ramadaan horay ayay u soo siqdaa mar kasta, taasi oo ka dhigaysa bil dhex socota xilliga.
Intaas waxaa dheer, marka lagu gudo jira wakhtiga Bisha Ramadaan, Soonku waxuu bilaabmaa marka qoraxdu soo baxdo aroortii ilaa laga gaadho qorax dhaca galabtii.
Shaxda hoose waxaad ku arki wakhtiga bisha Ramadaan bilaabanayso iyo dhammaanayso ee sanadaha 2010 ilaa 2020ka.
2010 1431 11 Ogosto 9 Sebteembar
2011 1432 1 Ogosto 29 Ogosto
Kalandarka bisha Ramadan ee wakhtiga u dhexeeya 2010 iyo 2020.
Laga yaaba ina wakhtiyadu isbedelaan.
↑ name="Hadith al-Bukhari 3:123"Hadith al-Bukhari 3:123 Hadith Collection
↑ The Principal Islamic Days of Observance according to the Umm al-Qura Calendar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bisha_Ramadan&oldid=160433"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Sebteembar 2016, marka ee eheed 07:53.